Sọftụwia Njikwa Ihe Nlekọta IT | ITAM Software | Akụrụngwa Ndepụta Akụrụngwa
N'oge ntiwapụ COVID-19, Motadata na-agba mbọ ịnye ọrụ na-enweghị nhịahụ.
Ndị ahịa & Àmà
Ayinye na Nghọta
Nlekota oru netwọk
Nhazi netwọkụ (NCM)
Nlekọta netwọsị okporo ụzọ
Kpọtụrụ ndị na-
Njikwa IT IT
NMS jikọrọ ọnụ
FCAPS maka Telcos
Njikwa Adreesị IP (IPAM)
Ngwá Ọrụ Nchọgharị SNMP MIB
Nweta Ọnwụnwa n'efu
Motadata ServiceOps - Njikwa akụ
Na-ebuli ROI elu, belata ihe egwu, ma nweta Nzipụta zuru oke na akụrụngwa IT gị
Nchịkọta Ọdịmma IT IT
Nyochaa na Jikwaa ndụ ndụ zuru oke nke akụ gị
Gbanwee ndị otu IT karị site na ịnye ha nnukwu visibiliti ma jikwaa ngwaike ngwanrọ na ngwanrọ Motadata ỌrụOps Nchịkọta Njikwa Ihe onwunwe IT (ITAM). Nyochaa ngwaike gị na ngwanrọ arụmọrụ ma melite nnyefe ọrụ na omenala yana predefined njikere na ikike ịkọ akụkọ na Motadata ServiceOps ITAM software. Sochie ma jikwaa akụ gị niile site na otu echiche dị n'otu, n'oge ndụ ha niile - ọ bụ mmezi, ịzụrụ ihe, mkpofu, ma ọ bụ mbibi site na iji sistemụ njikwa akụ IT.
Hazie akụrụngwa na ụgwọ yana ego na ihe efu.
Gbanyụọ ụgwọ ma gbochie mmebi nke ihe IT.
Izute Nkwado chọrọ
Gbanwee ihe egwu nchekwa metụtara yana ijikwa nkwekọrịta na ikikere nke ọma yana itinye n'ọrụ ngwa ahịa
Ejikọtara ya na Njikwa tiketi iji nweta foto zuru ezu nke akụ site na itinye ihe ndị metụtara akụ ndị emetụtara site na tebụl ọrụ jikọtara.
Lelee ihe niile IT na Ihe na-abụghị IT
Agent na Agentless chọpụtara
Barcode, QR code based chọpụtara
Mee ma jikwaa ngwa ahịa dị iche iche iji jikwaa akụ gị niile na-abụghị nke IT.
Mmekọrịta map dị n'etiti akụ na ọrụ azụmaahịa
Jikwaa ikikere ngwanrọ na ojiji
Mee ka nchịkwa ngwanrọ dị na ngwanrọ ngwanrọ iji nyochaa ojiji nke ngwanrọ (eji, jiri ya eme ihe, anaghị eji ya)
Na-ejikwa usoro ndụ zuru ezu nke ngwanrọ dịka mmelite ikike, mmebi wdg maka ọrụ ọ bụla na nzukọ., Na-achọpụta ngwa ngwa na-akwadoghị ma machibidoro iwu
Zute usoro nyocha nke ngwanrọ na ịdị nfe
Jikwaa mmefu ego IT ka mma
Mee ka usoro njikwa ihe nkwekọrịta akụ na ụba buru ụzọ mee ka ị mara ọkwa maka mmebi ha tupu oge eruo
Nọgide na-edebe katalọgụ nke ngwaahịa na ngwaahịa nke akụ niile nke ụlọ ọrụ ahụ nwere ọnụahịa yana nkọwa nkọwa
Nchoputa Onwonye Akpaaka
Chọpụta na mata niile pingable IT Akụ nan'akụkụ ma ọ bụ na mpụga netwọk na ịkọwa ha na ole na ole clicks. Anyị na-akwado Nchọpụta Akụrụngwa site na Microsoft Ọrụ ndekọ na Ọnọdụ IP Netwọk na nye Ngwa Agent maka Akụ nke na-abụghị akụkụ nke netwọkụ / ngalaba ọ bụla. Nchọpụta anyị nwere ihe na-enweghị obere nwere nkwado maka ụdị UNIX na UNIX dị ka sistem. The Software ngwanrọ IT -akpaghị aka Dopplers na maapụs niile IT akụ na Windows, Linux, Macintosh na emelite ha na oge obula.
Njikwa Ndụ Ndụ
Nweta, hazie, jikwaa ma debe njedebe IT iji jikwaa ngwa ahịa nwere ọgụgụ isi. Na-esochi nke ahụ ike, buru amụma banyere ihe egwu, na ebuli akụ maka ezigbo itinye n'ọrụ ya na IT Asset Management system. Meziwanye uru sitere na akụ na-arụ n'oge ndụ ha niile.
Njikwa Akụrụngwa Akụ
Debe ihe niile IT na akụ na-abụghị IT na ngwaahịa ma ọ bụ na-eji. Ọ bụrụ nkwekọrịta, ngwaike, ngwanrọ, na ihe nhazi ndị ọzọ, tulee uru ha, ma jiri ozi azụmaahịa kacha ọhụrụ wee hazie atụmatụ. Ikpo okwu ahụ na-echekwa, ihe ndekọ, na-ejikọkwa ngwa na ngwaọrụ niile achọpụtara - yabụ ịmara ihe arụnyere, onye na-eji ya, ma ọ nwere ikikere nke ọma.
Nlekọta Ahịa Software
Usoro njikwa akụ IT enyere aka na ijikwa na kachasị mma ịzụta, nkenye ọnọdụ, ndozi, itinye n'ọrụ, na mkpofu ngwa ngwanrọ n'ime nzukọ. na- Mara ọkwas ọ bụrụ na ewepụla sọftụwia sitere na akụrụngwa ọ bụla achọpụtara tupu ịdebanye aha ndị ọrụ.
Njikwa ikikere ngwanrọ na Metering Ngwanrọ
A ụlọ ọrụ na-gụrụ ihe ize ndụ iwu mgbe ọ na-amaghị nke Software na-agba ọsọ na ya igwe. Optimize, jikwaa, na soro software ojiji na niile nrụnye yana Njikwa Ikike Software. Ndị otu IT nwere ike nyochaa ụkpụrụ ojiji nke ngwanrọ wee kpebie maka mmeghari ohuru ya, nkwalite ya, ma ọ bụ zụrụ ikikere ndị ọzọ iji ngwanrọ Software.
The ITAM Ihe ngosi CMDB na-enyere aka nọgide na-enwe, Ebe nchekwa echekwara iji jikwaa & maapụ ihe niile IT Asset configurations, ma si otu a na-esochi njirimara & nkọwa ya maka nhụta miri emi banyere etu ha si jikọọ ibe ha n'ime IT Infrastructure.
Streamline ma rụọ ọrụ IT pna-agba ume nke ọma site na ijikwa usoro ndụ zuru ezu nke Purzụta Ihe site na otu windo nwere nnyefe ahaziri ahazi na nnabata usoro. Mfe kpebie, nweta, egwu, ma kọọ akụkọ ịzụta data nke akụ ya na ngwanrọ ITAM.
Mjigide ihe ndekọ zuru ezu nke na nzukọ's nkwekọrịta na ndị na-ere ahịa nke atọ. Mee ka amara gị ọkwa na nkwekọrịta nkwekọrịta ma jikwaa renewals na-eji nkwekọrịta ahụ dum life okirikiri. Jikwaa primary na sub-contracts site na guzosie ike mmekọrịta nne na nna na nwa n'etiti nkwekọrịta ahụ.
Nkwado Arụ Ọrụ Akụrụngwa
Akpaghị aka workflow nkwado na mee usoro mgbanwe ọ bụla na Asset ma ọ bụ maka mmụba nke ihe ọhụụ / agbakwunye agbakwunyere. Na akpaghị aka zipu ozi emails iji mechie ndị ọrụ na ọrụ bara uru yana nkọwa achọrọ ma jụọ nkwenye maka otu iji ihu ọma arụ ọrụ na sistemụ njikwa akụ IT.
Nkwado na Desktọpụ teweta
Were akara nke desktọọpụ iji dozie nsogbu ma ọ bụ mee mgbanwe, gwa ndị ọrụ njedebe tupu ị na-achịkwa desktọọpụ ha, abanye ihe kpatara njikọ, gbanwee ngwa ngwa n'etiti ọtụtụ ntanetị, nyefee ọtụtụ faịlụ, wdg.
Barcode na QR Code Nkwado
Nweta usoro ihe omume ma ọ bụ koodu QR maka akụ ọ bụla dị na CMDB ka ndị ọrụ jikwaa ngwongwo anụ ahụ ha. Nanị bipụta ma bupụ koodu barcodes / QR (PDF) maka ndị ọrụ iji kpado akụ ha ngwa ngwa. Ndị admins nwere ike ịgbakwunye prefixes nke ha.
N'ịwa akụkọ dị ka kwa chọrọ ngwa ngwa na n'ụzọ dị mfe na tupu kọwaa ma ọ bụ customizable akụkọ ndebiri ka mata okpu. Ọ na - enye gị ohere ịmepụta dashboard ahaziri iche, na - enye ikike iji dakwasị ala na - akparaghị ókè iji weghachite ozi ị chọrọ maka ọtụtụ ndị na - ejide osisi - IT, Ego, Enyemaka oche wdg.
Bido ijikwa akụrụngwa IT gị nwere otu ikpo okwu jikọtara ọnụ
KAROSTA DBARA data ỌR. Gị
Bido ikpe ikpe 30-ụbọchị n'efu.
Bido Ọnwụnwa Free
Motadata maka usoro BFSI
Motadata maka Gọọmentị